उनको पति कसरी काम गर्ने?
मनोविज्ञान र सम्बन्ध परिवार र विवाह
अब एक भरोसा महिला, एक सफल महिला, कुनै पनि आश्चर्यचकित छैन, त्यो पनि आश्चर्यचकित हुनेछ कि उनको पति बच्चा संग घरमा बस्छ र गृहकार्य गर्दैछ, र सबै सुरक्षा उनको छ।
समानताको लागि संघर्षमा, महिलाहरूले प्राप्त गरेका छन् कि तिनीहरूले पुरुषहरूसँग भूमिका परिवर्तन गर्न सक्छन्। केहि हद सम्म, यो पनि राम्रो छ, सबैले के गर्छ कि सबै भन्दा राम्रो मनपर्छ, किनकी महिलाहरु बीच धेरै क्यारियरहरू छन्, र केहि पुरुषहरू साँच्चै पाई र लोहा डायपर गर्न चाहन्छन्।
तर सबैसँग उचित दायराहरू छन्, यस अवस्थामा तिनीहरू त्यहाँ पुग्छन्, जहाँ भइरहेको छ के स्वैच्छिकता। वास्तवमा, माथि वर्णन गरिएको पर्याप्त परिस्थितिको बाहेक, तपाईं अर्को देख्न सक्नुहुनेछ - एक जवान आमाले काम र घरको कर्तव्यहरू बीच कष्ट भइरहेको छ, र उनको पतिले एकैपटक नै सोचे जस्तो टिभी हेर्छ र विशेष गरी केहि सहयोग गर्न प्रयास गर्दैन। अथवा सम्पूर्ण परिवारले बच्चालाई फाइदा उठाउँछ, किनभने पत्नी एक निर्णयमा बसिरहेको छ, र पतिले स्वादको लागि नौकरी पाउन सक्दैन।
यो बुझ्छ कि किन यो बाहिर जान्छ कि केहि पुरुषहरू एक रोटीविनाको भूमिकामा लाग्न अनिवार्य छन्, र तपाईं कसरी आफ्नो पतिलाई काम गर्न जान सक्नुहुन्छ।
हामीले प्रश्नको साथ सुरू गर्नु पर्छ: "के यो सधैँ हो?" यही हो, के तपाईंले एक सफल मान्छेसँग विवाह गर्नुभयो जो कामबाट डराउँदैन र परिवारको फाइदाको लागि काम गर्न इच्छुक छ वा तिनले आफ्नो वित्तीय भइरहेको सुनिश्चित गर्न विशेष शुरुवातबाट विशेष गतिविधि देखाउँदैनन्। यसको कारण फरक हुन सक्छ।
यदि पतिले काम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे, पुरानो देखि सेवानिवृत्त भयो, तर नयाँ को लागी छिटो लागेन, यो एक मनोवैज्ञानिक संकट, संचित थकान वा अवसादमा हुन सक्छ। जीवनमा हरेक व्यक्तिको अवधिमा धेरै कमजोर छ जब। ती चाँडै र कुनै जटिलताहरू नतिजा मात्र नजिकका मानिसहरूको समर्थनको साथ सम्भव छ, तर यस्ता परिस्थितिहरूमा हाम्रा पत्नीहरूले आफ्नो पति देख्न चाहन्छन्, मात्र परिस्थिति बढ्दै जान्छन्।
यो पनि हुन सक्छ कि तपाईं आफैलाई आफ्नो पति आफ्नो गर्दन वरपर, उसलाई चरित्रको आफ्नो शक्ति देखाउन, जो तिनीहरूले निषेध गर्न सकेनन् देखाउन। एक स्वतन्त्र महिला जसले आफैलाई प्रदान गर्न सक्छ, सधैँ कुनै चीजमा उनको सहयोग गर्न चाहदैन। तपाईंले मानिसको भूमिकामा लिनुभएको छ, तपाईं यसलाई एक महिलाको रूपमा पुनः प्राप्त गरेर केवल आफ्नो पतिमा फर्कन सक्नुहुन्छ। थोडा नरम हुनुहोस्, अधिक सज्जन, नारी, र तपाइँको दोस्रो आधा एक मानिस जस्तै महसुस गर्न चाहनु पर्छ।
र यदि एक व्यक्तिले तपाईंको परिचिततामा एक सफल क्यारियर खोज्नु भएन भने, त्यसका आधारमा कट्टरप्राय परिवर्तनहरूको प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छैन, सम्भवत यो चरित्रको स्थिर विशेषता हो।
कसरी उनको पतिलाई नौकरी खोज्ने?
कुनै पनि मामला मा, यदि एक महिला को पति को एक अर्जुन को चाहना छ, उसलाई एक गंभीर मात्रा को धैर्य को आवश्यकता हुनेछ। आखिर, कुनै पनि मामला मा दोस्रो आधा देख्न सकिँदैन, बेकार पनि उत्साह हुनेछ।
यो आवश्यक छ कि चुपचाप र अपरिवर्तनीय कार्य गरौं कि निर्णय पछि मानिस यकीन छ कि उसले आफैले स्वीकार गर्यो। पाठ्यक्रम भण्डारफ्रेन्टको अगाडि दुखी सास हुन सक्दछ, कथाहरू जुन तपाईंको कार्य घट्दै जान्छ, एक प्रमुख स्थानमा समाचारहरू बिज्ञापनहरूसँग बिर्सन्छ वा रोचक रिक्तता बारे कुरा गर्दछ। सबै कुरा प्यारी र निरर्थक हुनुपर्दछ।
आफ्नो पति को हेरचाह गर्न को लागी उनको सपना को काम को चाहिए। र त्यसपछि त्यहि कुरा खोज्न प्रयास गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि, यदि कम्प्यूटर खेल खेल्न धेरै पटक बित्दछ भने, त्यसोभए उनलाई भनौं कि तपाइँ समीक्षाहरूमा कमाउन सक्नुहुन्छ। सायद तपाईंको पतिले काम गर्दैन किनकी उसले आफ्नो रचनात्मकता कहाँ डोऱ्याउन सक्दैन? त्यसैले उहाँलाई आफूलाई बुझ्न मदत गर्नुहोस्, सार्थक विचार पेश गर्नुहोस्। मुख्य कुरा - तपाईंको मान्छेमा विश्वास राख्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले अन्ततः आफैलाई विश्वास गर्नेछ र धेरै प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ।
कसरी पतिले अझ बढी कमाउँछ?
यदि तपाईंको पतिले राम्ररी काम गरिरहेको छ भने, तर आफ्नो कामको लागि एक पैसा पाउँछ र यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्नुहुन्न, सम्भवतः यो पूर्णतया यो सहज हुन्छ। यस अवस्थामा पनि, केवल चालाकले मदत गर्नेछ।
यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई आफ्नो पतिलाई केहि गर्न को लागी केहि गर्न को लागी उनको सिद्धान्तहरु को मुकाबला नगर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ स्थानीय चिकित्सकलाई पैसाको कमीको बारेमा उजुरी गर्नुहुन्छ र बिरामी सूचीहरू बेच्न शुरु गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाइँ बुझ्न पुग्न सक्नुहुन्न, र पतिको क्रोधको कारण वा उसलाई गैरकानूनी कार्यलाई धक्का दिन्छन्। आफ्नो पतिलाई समेट्न प्रयास गर्नुहोस् कि उहाँ अझ योग्य हुनुहुन्छ। सायद त्यसपछि उनी एक निजी क्लिनिकमा बसोबास गर्नेछन्, जहाँ उसले राम्रो वेतन पाउनेछ। तर तपाईं केवल एक मामला मा उसलाई समझा सकते हो - यदि तपाईं आफैलाई यसको बारे निश्चित हुनुहुन्छ।
यदि तपाईंको मान्छे साँच्चै आफ्नो कामलाई प्रेम गर्दछ भने यो गाह्रो हुनेछ। तर यदि उहाँ आफ्नो मामलाको प्रशंसक हुनुहुन्न भने अर्को विकल्प छ, तपाईंको पति कसरी कमाई गर्न कसरी प्राप्त गर्ने - काम परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित गर्न। केहि सभ्य विकल्पहरू छान्नुहोस् र तिनीसँग छलफल गर्नुहोस्। प्राय: सम्भवतः उनी साहसी भई यस्तो मद्दत स्वीकार गर्नेछन्।
तपाईंको प्रिय एक साथ विभाजित कसरी जीवित रहने?
एक विवाह कक्ष कसरी सजाय गर्ने?
शरद ऋतु शैलीमा विवाह
एक प्रेमी कसरी पाउनुभयो भने, यदि तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ?
10 अलविदा भन्न को तरिका
यदि एक पुरुषले विवाह गर्न चाहँदैनन्
विवाहको लागि कसरी अल्कोहल गणना गर्ने?
कदमद्वारा विवाहको तयारीको लागि तयारी
तलाक पछि कसरी आनन्दित हुनुभयो?
चर्चमा कसरी डटेको हो?
पिज्जाको लागि खरानी बिना खमीरमा कोफिरमा
सिङ्कमा कुन विटामिन छन्?
भविष्यको बच्चाको यौन सम्बन्ध सेरेना विलियम्सहरू जान्दथे
स्नातक 2018 को लागि ड्रेसहरू - नयाँ सिजनको सबैभन्दा फैशनेबल र सुन्दर पोशाक
ब्रिगेट म्याक्रोन र मेलिनिया ट्रम्पले व्हाइट हाउसमा भेट्नुभयो
कसरी विचार गर्न सिक्नु हुन्छ?
मेगन मार्कले प्रिंस हैरी को शुरुवात संग एक रिंग थियो
व्यवसाय संचारको प्रकार
कसरी चिमनी बनाउने?
गर्भावस्थाको दोस्रो महिना
हप्पी जनजातिको भविष्यवाणी - 2018 मा मानवताले सर्वोपयोगीको लागि पर्खिरहेको छ!
Fashionable Ugs 2016
ग्रीस मा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट
हड्डोस्टेटिक जडी बूटियों संग गर्भाशय ब्लीडिंग
बच्चा प्रायः टाढा हुन्छ
जाम देखि जाम
दुलहीको लागि जूता
मैले मेरो टिभीमा च्यानलहरू कसरी स्थापित गरें?
सर्दको लागि Daikon - खाना पकाउने व्यञ्जनहरू
© 2021 ne.tierient.com